တရုတ်အတုပြုလုပ်ထားသောသံမဏိ 800LBS အနားကွပ်ဂိတ်တံခါးအဆို့ရှင် GVF-00800-WF ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | DEYE
အတုပြုလုပ်ထားသောသံမဏိ 800LBS သည်ဂေါက်သီးအဆို့ရှင် GVF-00800-WF ကိုဂဟေဆော်ခဲ့သည်
စီးရီးအဘယ်သူမျှမ .: GVF-00800-WF
တရုတ်အတုတံခါးပေါက်အဆို့ရှင်ထုတ်လုပ်သူ DEYE မှပြုလုပ်သောသံမဏိ cl800LBS ဂဟေဆော်သည့်ဂေါက်သီးအဆို့ရှင် API ၆၀၂၊ ၁-၁-1 / ၂ လက်မ၊ RF အဆုံး၊ လက်ဘီး၊ ASME B16.10, -29℃~ + 425℃.
1/2 "3/4" 1 လက်မ Gate ကိုအဆို့ရှင်
A105N ဂိတ် Valve
API ကို 602 ဂိတ် Valve
Class 800 LB ဂိတ် Valve
အပူချိန်: -29 ℃ ~ + 425 ℃
ဒီဇိုင်းစံ: API ကို 602
အမည်ခံအချင်း - 1/2” 3/4” 1”
ဖိအား - CL800LBS
အဆုံးသတ်ဆက်သွယ်မှု: RF ။
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -29℃~ + 425℃.
စစ်ဆင်ရေး Mode: Handwheel
BB / WB OS & Y ဒီဇိုင်းအဆို့ရှင်
ရရှိနိုင်ပစ္စည်း: CS, အက်စ်အက်စ်, Alloy သံမဏိ။ A105N, A350LF2, SS304, SS316, F53, F51, ကြေးဝါ
optional ကို stem / ရိုး: A182F6A, A182F304, A182F316, SAF2507, SAF2205
ရွေးချယ်ခွင့်တံဆိပ်ခတ် / ထိုင်ခုံ: Stelite, STL, 2CR13, SS304, SS316 / F51 / F53
1 # ချုံ့,5# ချုံ့, 8 # ချုံ့, 10 # ချုံ့ 12 # အနားယူ
optional End ဆက်သွယ်မှု: BW, အနားကွပ်, threaded ။
ASME B ကို 16.5, ASME 16.47, ASME B ကို 16,25, B16.11
အရွယ်အစားအချင်း၏အကွာအဝေး: 1/2″ ~ 4″ (DN15 ~ DN50)
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - 150lbs ~ 2500lbs (PN16 ~ PN420)
ပြင်ပဖိအားသည်အစေ့များအကြားသက်ရောက်မှုအတွက်အကြီးမားဆုံးပြproblemနာဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဖောက်လုပ်ခြင်းသည်ဤပြproblemနာဖြစ်ပွားမှုကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်၊ ထို့အပြင်အတုသံမဏိအဆို့ရှင်များ၏သက်တမ်းကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။
ရေနံ၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အရည်ဓာတ်ငွေ့၊ ဘွိုင်လာရေနွေးငွေ့စနစ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ အတုအနားကွပ်ပေါင်းစည်း Gate Valve GVF-00150-F
နောက်တစ်ခု: ကာဗွန်သံမဏိ A216 WCB 150LBS ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆို့ရှင် GVC-00150
သတ္တုသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချရန်အမှုန်အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဝိုင်းရံထားသည်။
1500LBS ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆို့ရှင် threaded ...
အတုအနားကွပ်ပေါင်းစည်း Gate Valve GVF-00150-F
အတုသံမဏိ SW PN64 Gate Valve GVF -...